५ फागुन, काठमाडौं । लिग लिडर बार्सिलोनाले स्पेनिस ला लिगा फुटबलमा रियल भलाडोलिडमाथि कठिन जित हात पारेको छ । शनिबार राति आफ्नै घरेलु मैदान नाउ क्याम्पमा भएको खेलमा बार्सिलोनाले रियल भलाडोलिडलाई १-० गोलको कठिन जित निकालेको हो । बार्सिलोनाको जितमा कप्तान लियोनल मेस्सीले गोल गरे । खेलको ४३औं मिनेटमा पेनाल्टीबाट मेस्सीले गोल गर्दै बार्सिलोनालाई अग्रता
काठमाडौं–नेपालका क्रिकेट खेलाडीले दुई वर्षदेखि रोकिएको मासिक तलब एकै पटक पाउने भएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल (आईसीसी) ले खेलाडीको रोकिएको तलब एकैपटक पठाएको छ । नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) लाई प्रतिबन्ध गर्दै आएको (आईसीसी) ले खेलाडीको रोकिएको तलव एकैपटक दिन लागेको हो । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप) ले आईसीसीलाई खेलाडीको तलब वितरणका लागि खेलाडीको
१८ माघ, काठमाडौं । टी–२० अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट सिरिजको दोस्रो खेलमा यूएईले दिएको १०८ रनको चुनौती पछ्याउँदै ब्याटिङ गरेको नेपालले पाँच विकेट गुमाएको छ । पाँचौ विकेटको रुपमा सन्दीप जोरा एक रनमै आउट भए । योसँगै नेपाल पुरै दबाबमा आएको छ । नेपालका महत्वपूर्ण पाँच विकेट सस्तैमा गुमेपछि नेपाल दबाबमा आएको हो । यसअघि चौथो विकेटको
कप्तान पारस प्लेयर अफ द सिरिज घोषित
१४ माघ, काठमाडौं । कप्तान पारस खड्का युएई विरुद्धको तीन खेलको एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट सिरिजको प्लेयर अफ द सिरिज घोषित भएका छन् । युएई विरुद्धको अन्तिम तथा तेस्रो एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा शतक प्रहार गर्दै नेपाललाई जित दिलाएका कप्तान प्लेयर अफ द म्याचसँगै प्लेयर अफ द सिरिज घोषित भएका हुन् । कप्तान पारसले तीन खेलको सिरिजमा
१४ माघ, काठमाडौं । पारस खड्काको कप्तानी इनिङसँगै नेपालले यूएईविरुद्धको तेस्रो एकदिवसीय खेल ४ विकेटले जितेको छ । यससँगै तीन खेलको श्रृङ्खला २–१ ले आफ्नो पक्षमा पारेको छ । गत चैतमा एकदिवसीय मान्यता पाएको नेपालले दोस्रो सिरिजमै उपाधि जितेर ऐतिहासिक सफलता हात पारेको हो । यसअघि नेदरल्यान्ड्ससँग भएको पहिलो एकदिवसीय सिरिज भने १–१ को बराबरी
१४ माघ, काठमाडौं । कप्तान पारस खड्काले एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा शतक बनाएका छन् । युएईविरुद्धको अन्तिम तथा तेस्रो एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा कप्तान पारसले शतक बनाएका हुन् । योसँगै उनी एक दिवसीय क्रिकेटमा शतक बनाउने पहिलो नेपाली खेलाडी बनेका छन् । ५० ओभरको खेलमा भने पारसको यो चौथो शतक हो । उनले ९६ बलमा
१२ माघ, काठमाडौं । रोहितकुमार पौडेल र सोमपाल कामी चम्किँदा नेपालले दोस्रो एकदिवसीय क्रिकेटमा यूएईमाथि १४५ रनको फराकिलो जित हात पारेको छ । यससँगै तीन म्याचको सिरिजमा १-१ को बराबरी भएको छ । तेस्रो तथा अन्तिम म्याच पर्सि हुनेछ । सोमपालले लिए ५ विकेट नेपालले दिएको २४२ रनको लक्ष्य पछ्याएको यूएईले १९.३ ओभरमा ९७ रन
आहा ! रारा गोल्डकपमा १० टिम मात्र खेल्ने
१२ माघ, पोखरा । मोफसलकै प्रतिष्ठित आहा ! रारा गोल्डकपको १७ औं संस्करण फागुन दोश्रो साताबाट शुरु हुने भएको छ । सहारा क्लब पोखराको आयोजनामा फागुन ९ गतेदेखि १८ गतेसम्म हुने प्रतियोगितामा १० टिमको सहभागिता रहनेछ । यसअघि १२ टिम खेलाउँदै आएको आहा रारामा यस वर्ष समय अभावले टिम घटेको क्लबका अध्यक्ष केशबहादुर थापाले जानकारी
९ माघ, काठमाडौं । विभागीय टिम आर्मी दशौं सिमरा गोल्डकप फुटबलको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ । सिमरा रंगशालामा बुधबार भएको खेलमा आर्मीले आयोजक नव जनजागृति युवा क्लबलाई १–० गोलअन्तरले पराजित गर्दै उपाधि नजिक पुगेको हो । आर्मीको जितमा कप्तान नवयुग श्रेष्ठले गोल गरे । पहिलो हाफमा गोलरहित बराबरी खेलेको आर्मीले दोस्रो हाफमा सुधारिएको प्रदर्शन गर्दै